Pyrenees rock house, ukubukwa okumangalisayo, ingadi - I-Airbnb
Pyrenees rock house, ukubukwa okumangalisayo, ingadi
Canaveilles, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, i-France
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Jon
Ukubuka okumangalisayo okuvela endlini yedolobhana eyingqayizivele, eyakhelwe ebusweni bedwala. Ibekwe endaweni enokuthula yasentabeni, ingenye yezindawo ezinelanga kakhulu endaweni. Kokubili indlu nengadi yangasese inemibono emihle yezintaba. Indlu yakhiwe edwaleni futhi ihlala ifudumele ebusika futhi ipholile ehlobo. Yindawo enokuthula ebekwe endaweni efanele ukuhamba ngezinyawo, amachibi ashisayo, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni kanye nemizuzu engama-30 yokushayela cishe usuka ezindaweni zokushushuluza njengeFont Romeu. I-Carança Gorge enhle iyimizuzu eyi-12 uma ushayela.
Indlu inengadi yangasese ebiyelwe ngokuphelele enokubukwa okuhle kwezintaba ezizungezile kubandakanya neCanigou.
Isakhiwo simi kanje:
Igumbi lokuhlala: Ikhishi lepulani elivulekile / yokudlela / igumbi lokuhlala. Isitofu esibaswa ngokhuni, izipikha zeBluetooth, izitebhisi eziya:
Igumbi lokulala 1: Umbhede ophindwe kabili nombhede ongashadile, izitebhisi eziya ku-:
Igumbi lokulala 2: Imibhede emibili. Igumbi lokugezela lifinyelelwa ngaleli gumbi Amakamelo okugeza: Igumbi lokugezela eline-wc, usinki kanye neshawa. Igumbi lokugezela lisesitezi sesi-2, elixhumene ne-Bedroom 2.
Kufakwe amathawula nelineni lombhede.
Izitebhisi ezifika esitezi sokuqala nesesibili ziyimiqansa, ngakho-ke izingane ezincane kakhulu zizodinga ukugadwa, futhi indlu ayibafanele abantu abanezinkinga zokuhamba. Kukhona isango lokuphepha phezulu ezitebhisini ekamelweni lesi-2, ukuze izingane zikwazi ukulala lapho ngokuphepha.
Ingadi itholakala ngegumbi lokulala lokuqala elinezinyathelo ezimbalwa.
4.70 out of 5 stars from 90 reviews
4.70 · 90 okushiwo abanye
I-Canaveilles ngokwayo iyidolobhana elihle, elinelanga elibheke eningizimu eliseceleni kwegquma, elinokubukwa okumangalisayo kwe-Canigou nezinye izintaba, nokuhamba okuhle kokungena emagqumeni ngemuva. Inenkundla yeMairie, isonto, inkundla yebasketball kanye namaswing ezingane. Izitolo eziseduze kanye nendawo yokuphuzela utshwala kuse-Olette, okuyimizuzu emi-5 uma ushayela (noma imizuzu engu-40 indawo enhle kakhulu yehla umqansi endleleni encane), futhi inekhefi/ibha, ikhemisi, ihhovisi leposi, ibhula kanye nebhikawozi/ isitolo segrosa esincane esiyisisekelo. izinhlinzeko. IPrades ingamakhilomitha angama-25 ukuya empumalanga futhi inezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela kanye nenhlobonhlobo yezinye izinsiza, okuhlanganisa nemakethe yangoLwesibili ehamba phambili.
Indawo yasemaphandleni ezungeze indlu nakuso sonke isifunda iyamangalisa kulabo abathanda imvelo, ukugibela izintaba, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni kanye nokukhuphuka. Izintaba eziphakeme, imihosha ejulile, imigede ewumbukwane, imifula ecwebe njengekristalu namachibi akuzungezile.
Ingadi ibheke ezansi esigodini somfula lapho igeyiji ewumngcingo ethi ‘Petit Train Jaune’ (Isitimela Esiphuzi Esincane) sithatha abagibeli komunye wemizila yesitimela ebukekayo kakhulu yaseYurophu. Ungabuka isitimela esincane sidlula endlini nasengadini.
Eduze, iziphethu ezishisayo ezinothe ngamaminerali zigeleza ziphuma ezintabeni, ziye emachibini okugeza, kokubili endaweni yawo yemvelo nasendaweni ethandekayo yedamu lokubhukuda elivulekile e-St Thomas les Bains (10km away).
Ukushushuluza kuzo zombili i-Font Romeu kanye ne-Cambre D'Adze kuyimizuzu engama-35 ukusuka lapho. I-Les Angles iyindawo yokuphumula ethandekayo elungele umndeni futhi icishe ibe yimizuzu engama-40 ukushayela.
Lesi sifunda sicebile ngentshisekelo yomlando enamasonto amaningi e-Romanesque nama-abbeys asendulo. Eziningi ze-'Plus Beaux Villages de France' zingaphakathi kwedrayivu emfushane.
Futhi-ke, ungakwazi ukukhuphuka i-Canigou! Akhona nama-jeep angakuyisa kakhulu. Uma ufuna ukuhamba ngezinyawo noma ukugibela ngomhlahlandlela, singancoma umhlahlandlela onolwazi endaweni.
Siyajabula ukukuthumela ulwazi mayelana nezinto eziningi ongazenza, izindawo zokudlela, amakhefi, izimakethe nokuhamba ngezinyawo endaweni njll.
Lover of mountains, historian, father of two girls (10 & 12), partner to Elaine. We kept coming back on holiday to the Conflent valley, never imagined we'd buy a house but discovered that the beautiful cottage we stayed in in Canaveilles was for sale and...
Lover of mountains, historian, father of two girls (10 & 12), partner to Elaine. We kept coming back on holiday to the Conflent valley, never imagined we'd buy a house but disc…
Lutho ngaphandle uma kunesidingo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Canaveilles namaphethelo